Suuqa Saamiyada Masar oo Lumiyay Lacago Badan. (Warbixin) – Shabakadda Amiirnuur
January 7, 2020 9:16 am by admin Views: 58
Wararka dhanka dhaqaalaha ee ka imaanaya Masar ayaa waxay sheegayaan in Suuqa Saamiyada Masar ay soo wajaheen khasaarooyin lixaad leh taasoo ay u sabab yihiin arrimo badan.
Suuqan ayaa lumiyey qiyaastii 25 bilyan oo rodol (una dhiganta qiyaastii 1.5 bilyan doolar).
Tilmaanta ugu weyn ee saamiga “EGX30” ayaa luntay qiyaastii 4.3% muddo ku siman bilowgii kalfadhiga axaddii ilaa dhammaadka ganacsigii shalay wax ka yar saacad, maadaama ay hoos ugu dhacday heerka 13283 dhibcood, oo ay ka dhasheen iibka maalgashadayaasha Masar.
Tilmaanta “EGX70” ee saamiyada yar iyo tan dhexdhexaadka ah ayaa hoos u dhacday 4.77%, iyo tusaha “EGX100” oo ka ballaaran 4.79%.
Suuqa caasimadduna si gaar ahaaneed wuxuu u lumiyay 28.7 billion rodol iyo dheeraad.
Macaamiisha reer Masar kaliya waxay diiwaan geliyeen iibka saami dhan 71.4 milyan ginni, halka maal-gashadeyaasha shisheeye iyo kuwa carbeed ay diiwaan geliyeen iibsiyada saafiga ah ee kala ahaa 68.9 milyan iyo 2.5 milyan oo rodol, siday u kala horreeyaan.
Xawaaladda maal-gashadeyaasha Masar ee saami-qaybsiga iyo dammaanadda ayaa duubay saami dhan 372.1 milyan oo rodol, waqtigaasoo maal-gashadeyaasha shisheeye iyo kuwa carbeed ay diiwaan-geliyeen iibsiga saafiga ah oo ahaa 369.6 milyan oo gini iyo 2.5 milyan oo rodol, siday u kala horreeyaan.
Madaxii hore ee jaaliyadaha maalgashiga tooska ah ee Masar iyo Carabtu wuxuu ku baaqay in dawlada Masar ay dib u hubiso suuqa, isaga oo tilmaamay in sarrifka saamigu u baahan yahay erayo dammaanad qaad ah oo ka imanaya dawladda si loo xasiliyo maal gashadayaasha suuqyada saamiyada.
Dowladda Masar ayaa sheegtay in culeyska dhaqaale ee dalkeeda soo wajahay uu sabab ahaan qeyb ka yahay fara galinta cusub ee ay Turkidu ku sameeyeen Liibiya taasoo lumineysa fursado dhaqaale oo Masaaridu leeyihiin.
Afhayeenka rasmiga ah ee Madaxtooyada Masar, Danjire Bassam, ayaa sheegay in Sisi uu guddoomiyay kulanka Golaha Amniga Qaranka maalmo ka hor si uu ula tacaalo wixii ka soo kordha xasaradda Libya iyo hanjabaadaha faragelinta millateriga Turkiga ee Liibiya ay matali doonto, isla markaana ay qeexeyso tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee wax looga qabanayo sida uu yiri khatar kasta oo ku timaadda amniga Masar.
Meel walboo uu Turkigu tago dhaqaaluhu wuu dumaa, taa waxaa sii dheer in reer Yurub iyo Mareykanku ay xasarado hor leh ka abuurayaan dhulalka carabta siiba wadamada shidaalka uu ku jiro, taasoo saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha dalalkaas.